Bluegrass otu afọ: nkọwa, ngwa, njikwa akara - Mkpụrụ ubi - 2020
Nile banyere bluegrass annuals
Ọtụtụ mgbe, ịma mma nke ahịhịa na-ekpo ahịhịa. N'okwu anyị anyị ga-agwa gị ihe bluegrass bụ otu afọ, ma nye nkọwa ya. Anyị ga-enyekwa aro banyere otu esi alụ ọgụ a.
Ebee ka eto eto?
Esi eme ihe
Egwu na-achịkwa ahịhịa
Osisi bụ nke ọdịdị Bluegrass, ezinụlọ ọka. Na-ahụ mmiri na ebe ndị a na-ahụ anya. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịchọta ụdị nke na-anabata oge oyi oyi. Ọnọdụ ndị dị mkpa na-enye aka mee ka e nwee nnukwu ahịhịa, nke na-emetụta ọdịdị dị mma nke ọtụtụ omenala. Osisi nwere usoro mgbọrọgwụ fibrous, ogologo ị ga. Ha dị elu nwere ike ịbụ 10-40 cm. Akwụkwọ ahụ dị warara na linear. A na-anakọta okooko osisi na spikelets nke 3-7 iberibe.
Ọ dị mkpa! Mgbe na-eto eto bluegrass maka lawn, ọ dị mkpa iji mee ka mmanụ na mmanụ aṅụ na-arụ ọrụ n'ime ala - ha ga-emepe ngwa ngwa ma mee ka mkpuchi ahụ buru ibu ma maa mma.
Mkpụrụ ahụ na-anọchite anya ihe ngosi nke mpempe akwụkwọ, nke e depụtara na akụkụ elu.
Otu n'ime ahịhịa dị otú ahụ nwere ike ịmịpụta mkpụrụ ruru otu puku. Mkpụrụ osisi nwere ezigbo mkpụrụ germination. Ọ na-eto site na omimi nke 3-4 cm A kacha nta okpomọkụ dị mkpa maka germination, nke bụ + 3-5 ° Cel, Otú ọ dị, kacha mma ibu etịbe mgbe ọ na-ebili ka + 16-20 Celsius. Nke mbụ na Ome gosiri akwukwo akwukwo. Mpempe akwụkwọ na-eto eto nwere ike iru 15-30 mm, n'obosara - aka 1 mm.
Bluegrass osisi nwere ike ịchọta ya n'akụkụ ọ bụla nke ụwa. Nanị ebe ọ na-eto eto bụ Central Asia na North North. Ebe ndị a na-adabara adaba maka osisi:
mmiri mmiri na ala ahịhịa juru;
ebe ehi na-ata nri;
pebbles ma ọ bụ ájá n'akụkụ osimiri;
ala na akwa nitrogen ọdịnaya.
Ị ma? Bluegrass aghọrọ agbawa amalite itolite na ọdịda ma na-etolite n'oge oyi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'ihi àgwà a, ọ dị mma maka ịmepụta oge oyi green lawns.
Ọtụtụ mgbe, ihe ọkụkụ osisi ahụ na-egosi ebe ndị na-eto eto na ihe ọkụkụ.
A na-eji otu afọ nke Bluegrass mee ihe dịka nri maka anụ ụlọ. Ụmụ anụmanụ na-ata nri mgbe niile. Osisi ahụ nwere ihe oriri ma chọọ mma anụ ụlọ. O di nwute, obere oke ahihia ekwenyeghi iji ya mee ihe dika nri anu.
Ị ma? Ụdị ahịhịa ọ bụla nwere ọnụ ọgụgụ aka ya. Dịka ọmụmaatụ, n'adịghị ka bluegrass nke kwa afọ, ụdị osisi bluegrass nwere ike ịmepụta nanị afọ 2-3 mgbe ọ nwụsịrị, nke na-eme ka ọ ghara ikwu na ọ bụ ahịhịa ndụ.
Na-eto eto bluegrass dị nnọọ ngwa ngwaya mere, a na-ejikọta ya na mkpuru ahịhịa mgbe ọ na-emepụta mkpuchi anụ ọhịa. Mana iji ahihia dika ahihia, dika osisi nke onwe ya adighi nma, ebe o ga egbochi mkpuru nke osisi ndi ozo. Ọ bụ maka nke a kpatara na e kwuru na ata ahụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-adịghị anakwere ka ị na-eto eto na bluegrass kwa afọ na saịtị ahụ, ị ​​ga-achọ ịma ihe nchịkwa na-emetụta osisi a.
Ọ dị mkpa! Ọtụtụ mgbe, bluegrass na-egosi na ebe ndị a na-atụ egwu nke ahịhịa, nke a na-akpọ "akpọrọ isi".
Oge na-ewe, ma irè bụ akwụkwọ ntuziaka weeding. Ihe dịka izu atọ ka a kụrụ osisi ahụ, ọ bara uru ime ihe omume a. N'oge a, mgbọrọgwụ enweghị oge iji guzosie ike na ala, ya mere usoro ga-adị irè. A ghaghị ịtinye spade dị ka o kwere mee n'ime ala iji wepụ usoro mgbọrọgwụ nke ahịhịa. Mgbe ewepụsịrị igbo ahụ, ọ dị mkpa ka ị gbanye ala na mmiri ya.
Anyị na-akwado weeding oge ọ bụla mgbe mowing ahịhịa ndụ.
Ubi ahihia bu kwa uzo di nma iji merie bluegrass. Ngwa kachasị mfe bụ Lontrel 300 na Magnum. Ihe ha na-eme bụ na ha na-ebibi ata ah u, ma ha anaghị emerụ ala ahịhịa. Mgbe a kpugheere ya, ọ na-emetụta ma akụkụ ala nke osisi ahụ na ọkpụkpụ ya.
Ọ ga-adọrọ mmasị gị ka ị gụọ otu esi ewepu ahihia site na iji ọgwụgwọ ndị mmadụ, yana iji ọgwụ ndị dị ndụ: "Ground", "Hurricane Forte", "Tornado", "Stomp", "Lazurit", "Roundup", "Zenkor" na Agritok, Esteron, Grimes
Mgbe ị na-eji kemịkal, ọ dị mkpa iji rube isi n'iwu ụfọdụ:
maka nhazi ọ dị mkpa ịhọrọ ụbọchị na-ekpo ọkụ, nke na-adịghị ọkụ;
ọ bara uru ilekọta nanị ata ahịhịa;
tupu ịmalite ịgwọ ọgwụ osisi, a gaghị agbanwe agbanwe mkpuchi osisi ahụ;
ọ ga-ekwe omume ịkwanye ahịhịa ahụ mgbe 2-3 ụbọchị.
Tupu ịmalite ọgwụgwọ osisi, ọ dị mkpa iji nlezianya na-amụ ntụziaka ahụ, dịka ụfọdụ ọgwụ ọjọọ nwere ike inwe àgwà nke ha.
Iji kpamkpam tufuo ata ah u, Ị ga-eme ọ dịkarịa ala 2-3 ọgwụgwọ.
Mụta ihe pesticides, ụmụ ahụhụ na otú ha si arụ ọrụ n'ọhịa.
A na-akpọ Bluegrass kwa afọ na-akpọ osisi ambiguous, n'ihi na ọ nwere ike ịghọ ahịhịa na uru, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-azụ anụ ụlọ. Ọ bụrụ na ọchọrọ, osisi ahụ na-etolite kpọmkwem iji nọgide na-eji ya dị ka ahịhịa.